जुन 15, 2019 जुन 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments केराउ, डा. राम बहादुर बोहरा
हाम्रो खेतमा उत्पादन हुने केराउ तरकारी र दालको रूपमा बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । केराउ त्यसै खाने चलन पनि छ । यो पौष्टिक हुनुको साथै सहजै उपलब्ध हुने तरकारी पनि हो । केराउमा प्रोटिन प्रशस्त पाइने हुनाले स्वास्थ्य मा राम्रो भूमिका केराउले खेलेको पाइन्छ ।
यसबाहेक, यसमा फलामको थोरै मात्रा हुन्छ । मटरमा अत्यधिक प्रोटिन हुने भएकोले यो सब्जीको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा स्वस्थ मानिसलाई चाहिने तत्व यो मटरको दानामा रहेछ । प्रोटिन मानिसको स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो । यसले शरीरको कोशिका निर्माण र मर्मतमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
टिन हुने भएकोले यो सब्जीको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा स्वस्थ मानिसलाई चाहिने तत्व यो मटरको दानामा रहेछ । प्रोटिन मानिसको स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो । यसले शरीरको कोशिका निर्माण र मर्मतमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
यो हरेक उमेरका मानिसलाई आवश्यक हुन्छ । गर्भावस्थामा प्रोटिन बढी आवश्यक हुन्छ । शिशुको निर्माण प्रक्रियामा पनि यसको अहम् भूमिका हुन्छ । मानिसको पूरै जीवनमा प्रोटिन धेरथोर आवश्यक भइरहन्छ । यसैले हाम्रो खानामा पनि कुनै न कुनै प्रोटिनजन्य खाद्य पदार्थ सामेल गराइएको हुन्छ ।
केराउमा प्रोटिन मात्र होइन अन्य खनिज भिटामिन तत्व पनि रहेकाले स्वास्थ्यमा राम्रो भूमिका केराउको सेवनले खेलेको पाइन्छ । केराउमा प्रोटिन रहेछ तर हामीले यस्ता प्राकृतिले दिएका चिजहरू सेवन नगरी हामीले कृतिम प्रोटिनको सेवन बढि गरेको पाउछौं । हरेक व्यक्तिमा जबसम्म स्वास्थ्यका लागि औषधि होइन मटर केराउ खाउ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
← डेंगू फिवरबारे जानकारी
बेलुकीको खाना चाडै खाँदा हुने फाइदाहरु →
ग्रीन-टी पिउनुका बेफाइदाहरु
मार्च 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
हृदयघातवाट बच्न के के खानेकुराहरु खानुहुन्छ र खानुहुदैन ?
जनवरी 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
2 thoughts on “मटर केराउको उपयोगिता”
Pingback:यस्तो छ टिमुरको उपयोगिता, जानी राखौ
Pingback:यस्ता छन् मानव स्वास्थ्यमा पुदिनाको उपयोगिता, जानी राखौ